Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ ugbu a na Philippines na ịsa ahụ na -ekpo ọkụ dị jụụ na Kawa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ozi Na -agbasa Ozi Philippines » Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ ugbu a na Philippines na ịsa ahụ na -ekpo ọkụ dị jụụ na Kawa
Industrylọ Ọrụ Ọbịa • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Kawa ịsa ahụ na Antique
Ọnụ ọchị Philippine bụ anwansi dị ọcha nye ọtụtụ ndị nọ n'ụwa, mba East Asia a dịkwa njikere ugbu a ịnabata ndị ọbịa.
Gini mere ị gaghị atụ aro ịsa ahụ Kawa. Ngalaba njem nlegharị anya nke Philippines na -ekwe nkwa ime ime. na ahụmịhe izu ike
Ngalaba njem nlegharị anya nke Philippines (DOT) na -akwado ịnabata ndị ọbịa ọzọ, ọ na -etolite mmemme ọhụrụ maka ndị njem ka ha hụ mgbe a na -agba mbọ hụ na emebere ụkpụrụ nchekwa mba ụwa niile na ebe dị iche iche.
Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ n'ezie na Philippines, ebe DOT na -agụgharị ihe omume iji nye ahụmịhe ọhụụ na pụrụ iche maka ndị njem mba ofesi. Gọọmentị Filipaị na-akwadebe nnabata ya maka ndị njem nwere mmepe akụrụngwa gụnyere nkwalite ọdụ ụgbọ elu ụlọ na nke mba anyị na ụzọ ọhụrụ na-agba mbọ nweta ngwa ngwa na mpaghara mpaghara anyị, ”onye odeakwụkwọ njem nleta Bernadette Romulo-Puyat kwuru.
N'ihe karịrị agwaetiti 7,000 na -enye ndị ọbịa ahụmịhe pụrụ iche, Philippines bụ ebe na -adịghị ka nke ọ bụla ọzọ. Ma ọ na-atụrụ ndụ n'ụsọ osimiri ma ọ bụ n'ugwu, na-anụ ụtọ ndụ obodo mepere emepe, ma ọ bụ na-emikpu n'ime ọdịbendị ụmụ amaala ya, ahụmịhe dị iche iche nwere ụdị dị iche iche maka ụdị ndị njem niile.
Nke a bụ mmemme Filipino asatọ pụrụ iche mmadụ nwere ike ịnwale site n'akụkụ dị iche iche nke mba a:
1. Na -agba ịnyịnya na ngwo ngagharị n'ime Intramuros
Were igwe ịkwọ ụgbọ ala gị mee njem ịkwọ ụgbọ elu gị nke ọma. Bambike Ecotours na -enye ohere inyocha obodo Intramuros nke nwere mgbidi na ụzọ dị iche. Bikgbọ achara ndị a na -abịa n'ọtụtụ nhọrọ maka ịnya ụgbọ ala dị mma yana Bambassadors na -arụ ọrụ dị ka ndị nduzi na ọmarịcha pụrụ iche nke Old Manila.
2. Na -emegharị site n'okporo ụzọ ikuku nke Banaue na igwe kwụ otu ebe
Kedu ụzọ kacha mma ị ga-esi nwee ọmarịcha nlele ụlọ osikapa mmadụ mere na 2,000 na Banaue? Leenụ, ya na ndị skuuta osisi ejiri aka see otu ụmụ amaala, n'ezie! Ejiri iberibe osisi na mpekere si na taya rọba ochie mee ya, ndị nwere ụkwụ abụọ a nwere ike ịga ọsọ ọsọ ruru 50kph, ọ bụkwa n'ezie ihe akaebe maka nka na nka nke ndị Ifugao.
3. Nwalee nguzozi gị na Stilts Bamboo na Cebu
Ihe mkpuchi Kadang-Kadang ma ọ bụ Bamboo na-eme ka ndị ọbịa hụ Philippines site na nlele dịtụ elu. Ndị njem nlegharị anya na Cebu nwere ike nwalee nguzozi na ọsọ ha site na ịzọ ụkwụ abụọ na isonye na asọmpi otu na -agba (ma ọ bụ na -ama jijiji) maka mita 100. Ewere ya dị ka egwuregwu ụmụaka site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, a matala ya dị ka egwuregwu ọdịnala n'okpuru Laro ng Lahi na 1969.
4. Gaa n'okporo ụzọ na njem Lahar na Pampanga
Mgbawa Pinatubo kpatara mbibi dị ukwuu na Central Luzon, mana ndị obodo achọpụtala ụzọ ha ga -esi jiri lahar na -asọpụta site na ugwu mgbawa wee mee ka ọ bụrụ ebe ndị na -anụ ọkụ n'obi n'egwuregwu. Ndị njem nwere mkpa maka ọsọ nwere ike ide akwụkwọ njem n'okporo ụzọ na 4 × 4 ma ọ bụ ọgba tum tum na-agafe iyi na ala aja site na otu n'ime ala pụrụ iche na Philippines.
5. Zuo ike na ịsa Kawa na Antique
A na -ejikarị Kawa ma ọ bụ nnukwu ite esi nri nri fiesta na Philippines, mana na mpaghara Antique, ọ na -enye ahụmịhe dị jụụ na izu ike. Ebe ntụrụndụ ndị dị n'ugwu na -anabata ndị ọbịa mgbe ha jegharịrị n'ọhịa nke Tibiao na ebe ịsa ahụ na -enye ume ọhụrụ na kawa, mmiri kpuchiri n'elu ọkụ osisi wee were ahịhịa na okooko osisi na -esi ísì ụtọ. Ndị chọrọ ị nweta ụdị ọgwụgwọ ọzọ nwere ike ịga na Tibiao Fish Spa ebe ha nwere ike mikpuo ụkwụ ha n'ime ọdọ mmiri maka azụ ka o rie ma kpochapụ.
6. Gaa na Ugo Filipaị na Davao
Bịa leta ugo Philippine dị ebube, nke kacha ibu n'ime ugo na -adị ndụ n'ụwa. A na -echebe ụdị anụmanụ a nọ n'ihe egwu dị egwu na ebe nchekwa ahọpụtara dị ka ebe nchekwa anụ ọhịa Mount Hamiguitan Range na Davao. A na -akwụghachi njem njem siri ike ụgwọ site na nleba anya nke ịhụ gụnyere ohere ilele Philippines Eagles na -efe efe.
Maka nlele ngwa ngwa, ndị ọbịa nwekwara ike ịhọrọ ịga na Eagle Center nke Philippine, oke ohia mmiri ozuzo a na -achịkwa na Davao City nke na -echebe ma na -amụba Ugo Philippine na ndọrọ n'agha.
7. Mụta nka nka ịkpa akwa na okirikiri akwa Cordillera
Agbụrụ ndị dị na mpaghara Cordillera nwere ọdịbendị mara mma nke a kpara n'ime akwa ha. Njem a na -ewetara ndị njem nlegharị anya na -enye ọmarịcha ngosi na ihe ọmụma nke akwa ndị a na -emepụta na mpaghara site na iji owu na eriri ndị ọzọ sitere n'okike a kpara ma tinye n'ime usoro ọdịnala ha gafere n'ọgbọ. Njem njegharị gụnyere ịkpa obodo nta na ebe ngosi ihe mgbe ochie, na -enwe ohere ịga zụọ ahịa ihe ncheta maka ọrụ nka nke a na -adọkpụ n'uwe mara mma ma ọ bụ tinye n'ime iberibe ịchọ mma.
8. Organic Green Tour (OGT) sekit
Sekit a na-achọpụta mgbọrọgwụ nri nri na Philippines site na njikọta nke njegharị ugbo na nri ọdịnala site na iji ihe amịpụtara ọhụrụ. Njem ahụ na-agafe mpaghara Baguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay (BLISTT) nwere ebe ndị njem ugbo na Benguet Agro-Eco Farm na Sablan na UM-A Farm na Tuba. Ndị ọbịa nwere ike họrọ mkpụrụ nke aka ha ma nwee ike ịtakeụ mmemme emume obodo gburugburu ọkụ ọgbụgba n'etiti ikuku ugwu.
Usoro nchekwa atọrọ
Ihe omume ndị a na -echere ịlaghachi gị na Philippines ebe nnabata ọbịa nke obodo ahụ dakọtara. Mee ka ahụmịhe njem gị ka mma site na ịnwale mmemme ọhụrụ ndị a nke DOT mepụtara. Ka ụwa na -eche ịmalitegharị, ndị ọrụ njem nlegharị anya na Philippines na -enweta ọzụzụ mgbe niile. Ụlọ ọrụ na -emebe ihe nchekwa echekwara n'ime ụlọ ha iji chekwaa ndị ọbịa na ndị ọrụ ha, iji hụ na ọ bụ naanị ndị enyere ikike ka emeghe ma nabata ndị ọbịa.
Kọmitii Njem Nleta na Njem Nleta Worldwa nyere DOT akara nchekwa SafeTravels maka nnabata "usoro ahụike na ịdị ọcha zuru ụwa ọnụ" nke ga -ahụ na njem adịghị mma n'oge ọrịa.
Gọọmentị Filipaị site n'aka ndị otu na-ahụ maka mmekọrịta maka njikwa ọrịa na-apụta na-emelite usoro iwu ya mgbe niile iji chekwaa ndị njem.
Ịmara mmelite kachasị ọhụrụ na ndụmọdụ njem maka nleta Philippines https://www.philippines.travel/safetrip